မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ် နယုန်လကွယ်နေ့ ခရစ်နှစ်၂၀၁၀ခု ဇူလိုင်၂၆ရက် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှ ၊ တပတ်အတွင်း သတင်းပဒေသာများကို စတင်ကြေငြာပါတော့မယ် ။
ရွှေပြည်ကြီး၏ မြို့တော်နေပြည်တော်တွင် အမျိုးသားကြီး၂၇ဦးမှာ အမျိုးသမီးဝတ် ကြိုးကြီးချိပ်ခေါ် အချိပ်လုံချည်တမျိုးကို အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ မော်ဒယ်မသုံးဘဲ အမျိုးသား ကြီးများဝတ်ဆင်ကြေငြာသွားခြင်း ၊ ချောအစိမ်းရောင်လွင်ပြင်တည်ထောင်သူ မမချောခရီးမှပြန် လည်ရောက်ရှိခြင်း ၊ ဘလော်ကာ မကောင်းမွန်ဝင်း ပို့စ်အသစ်တင်ခြင်း ၊ ၂၀၁၀ အမတ်လောင်းမမ ဗေခေါ် မဗေဒါသည် ဆွီင်္ဒင်မှအပြန် ပိုစ့်သစ်တခုတင်ခြင်း ၊ ဘလော်ကာနှင်းမိုးမိုးခေါ် မိရွှေနှင်း သည်ဘလော့လဲမရေး ဘလော့ကိုလဲမစောင့်လျှောက်ဘဲ ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်လည်နေခြင်း ။
ရွှေပြည်ကြီး၏ မြို့တော်ကြတ်ပြေးတွင် ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် ၊ ကြိုးကြီးချိပ်ခေါ် မိန်း မ၀တ် အချိပ်လုံးချည်တစ်မျိုးအား ၊ အမျိုးသားကြီးများ ၀တ်ဆင်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခဲ့ကြသဖြင့် ၊ ခါ တိုင်းကြေငြာနေကြဖြစ်သော အမျိုးသမီးမော်ဒယ်များမှာ ရင်ထုမနာတစိမ့်စိမ့်ကြေကွဲလျှက်ရှိပြီး အခန်းနားကိုတတ်ရောက်လာသော လာအိုနိုင်ငံမှ အရာရှိကြီးမှာ ဂေးများစုဝေးနေထိုင်တတ် သောထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေသလိုခံစားရပါကြောင်းပြောဆိုပြီး ၊ ရွှေနိုင်ငံသားတို့အနေဖြင့် ဤ ကဲ့သို့ ယောကျာင်္းရင့်မာကြီးတို့အနေဖြင့် ဤနည်းဤပုံဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်သည်မှာ နှစ်သုံးဆယ်အ တွင်း လွန်တရာမှထူးခြားကြောင်းနှင့် ၊တောင်ပြုံးနတ်ပွဲတာဝန်ခံမာမီတဦးမှလဲ နတ်ပွဲချိန်မဟုတ်ဘဲဤကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ကြသည်မှာ ကိုကြီးကျော်ဟုခေါ်သောနတ်ကမကြိုက်ကြောင်း မန္တလေးမြို့မှ အချိပ်လုံချည်ရောင်းဝယ်ရေး တခုမှလဲ ၄င်းတို့တိုက်မှ ဇွန်လ၂၀ရက်နေ့ညတွင် မိန်းမ၀တ်အချိပ်လုံချည် ၂၇ကွင်း ၊ မောင့် ကျတ်သရေခေါင်းပေါင်း ၂၇ လုံး ၊ ကတ္တီပါ ခုံအမြင့်ဖိနပ် ၂၇ ရံမှာ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွား ကြောင်း ၊ ပျောက်သွားသော ပစ္စည်းအားလုံးမှာ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့စဉ်သတင်းစာတွင် လူတချို့ဝတ် ဆင်ထားတာတွေ့မြင်ရကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကိုးကားပြီးသိရှိရပါသည်..။
ခရီးထွက်နေသော အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်တည်ထောင်သူမမချောမှာ ခရီးမှပြန်လည်ရောက်ရှိပြီဖြစ် ကြောင်းနှင့် စာပေများဆက်လက်ရေးသားလျှက်ရှိပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
စာတပုဒ်ရေးပြီးလျှင် ၊ နောက်တပုဒ်နှင့် အလှမ်းကွာဝေးလွန်းလှသော ဂျပန်နိုင်ငံအခြေဆိုက် မမကောင်းမွန်ဝင်းသည် ၊ ယနေ့ညပိုင်းတွင် ကွန်ပျုတာစောင့်နတ်၏ နိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ဒစ်စနေးဆီး ဟူသော ပိုစ့်အသစ်ကို တင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
၂၀၁၀အမတ်လောင်းကြီး မမဗေခေါ် ဗေဗေသည် အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီး ဟိုသွားဒီသွားသွားရာမှ လမ်းတွင် ဘောပင်တချောင်းကောက်ရသဖြင့် အသင့်ပါလာသော စာအုပ်တွင်တွေ့ရာမြင်ရာကို ရေးခြစ်ရင်း မတော်တဆ စာပိုဒ်ဖြစ်သွားသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဗီဇာဖြင့်ခရီးသွားခြင်း ဟူ၍ အမည်ပေးခါ သူ၏ဘလော့တွင် တင်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ။
နှင်းမိုးမိုး ဘလော့ကိုတည်ထောင်သူ မရွှေနှင်းခေါ် ပေတိုးသည် အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီး ရွာရိုးကိုး ပေါက် ၊ လျှောက်လည်လျှက် စာလဲတလုံးမှမရေး ဘလော့သို့လဲမလာ သူ့၏ သင်ဆရာ ၊ မြင်ဆရာ ၊ ကြားဆရာဖြစ်သော ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပညာရင်နို့သောက်စို့နေသော နောင်တချိန်ကမ္ဘာကျော် ဘလော်ကာကြီးတဦးဖြစ်လာမည့်အပြင် ၊ သူထက်ရုပ်ရော အသံပါ ကိုးဆကျော် ဆယ်ဆနီးပါးမ က သာလွန်သည့် ခုဝယ်ဆရာလေး နောင်သော်ဆရာကြီးဖြစ်လာ မည့်ကိုကိုဇေတာရာအား လခမပေးဘဲ ဘလော့ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုခိုင်းခြင်း ၊ အခမဲ့ရေးသားစေ ခြင်း စသောဘလော့၏ ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်အသွယ်သွယ်ကို ဇွတ်ရောအဓမ္မပါ တာဝန်ပေးအပ်ပြီး ၄င်းကိုယ်တိုင်ကမှု ရွာရိုးကိုးပေါက် လျှောက်လည်လျှက်ရှိကြောင်း ဂျီတော့သတင်းအရသိရှိရပါ သည် ။
ယနေ့ဂြိုလ်တုကပေးပို့သည့်ပုံကြီးအရကပ္ပလီပင်လယ်တွင်တိမ်အ သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေ ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနလာင်္ရီတိုင်း အောက်ပိုင်းတို့တွင် အများအားဖြင့်သာယာပါ မယ် ၊ နေပြည်တော်နဲ့အနီးတ၀ိုက်အတွက် ခန့်မှန်းချက်ကတော့ ယနေ့မိုး ရွာရင်ရွာမယ်မရွာရင် မရွာဘူး ဤတွင် သတင်းများကိုကျေညာလို့ပြီးပါပြီ စက္ခုရှင်များ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ။ ။
Posted by နှင်းမိုး at 7:15:00 pm
ကျွန်မမှာတောင် အဲလို ထမိန်ကောင်းကောင်းတစ်တည်မှ မရှိဘူး။
အချိတ်ထမိန်ဆိုင်တွေမှာ ကြော်ငြာအနေနဲ့ ဒီဓာတ်ပုံကို ချိတ်ထားရမှာနော်..
ကြည့်ရတာ သတို့သားတွေနဲ့ နင်လား ငါလား..
ယတြယာချေတာလား မသိဘူး.. တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုဘဲ..း)
mp Baydar said...
Dear Mg Zay,
hey, I am still in Sweden and your essay is good. Also the picture is really nice haaaaaaan. where did you get it____.
no burmese access right now.
MP Baydar 88
အာ...... ကိုဇေ လုပ်လှချည်လား..
yoooo... like this new! wonderful writing.
ဇေရေ ပို့စ်လေးက လန်းလှချည်လားဟ
အင်း ဘလော့ဂါအတင်း အဲလေ သတင်းတွေ အစုံသိရတာပေါ့